डा. गोविन्द केसीका माग संसदभित्र प्रवेश, गगन थापाद्धारा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता – YesKathmandu.com
बिहीबार ०६, साउन २०७३
काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद गगन थापाले अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग बारे छलफल गर्न ब्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्नेसहितका माग राखी डा. केसी अनशनमा बसेका छन् । उनका मागमा छलफल गराउन थापाले ब्यवस्थापिका संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । यो सँगै अब केसीका मागले संसदभित्र प्रवेश पाएको छ ।
थापाको प्रस्तावमा सांसद धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठ समर्थक रहेका छन् । सोही टिमले अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई बोलाएर छलफल गर्न संसदको सुशासन समितिसँग पनि आग्रह गरेका छन् । उनले सुशासन समितिलाई आज निवेदन दिएका छन् ।
अख्तियार प्रमुखमाथी प्रश्न उठेपछि त्यसको छलफल हुनु पर्ने थापाले बताउदै आएका थिए उ । केही समय महिले म सभापति भएको समितिमा लोकमानसिंहज्यूलाई बोलाएका थियौ, उहाँले सुशासन समितिले वोलाए मात्र आउने बताउनु भएको थियो’, थापाले भने ‘सुशासन समितिले बोलाएर मेडिकल कलेजको सिट क्षमता बढाउन अख्तियारले दिएको गलत निर्देशनमाथी छलफल हुनु पर्दछ ।’
खोटाङको खानीडाँडामा हवाई उडान अवरुद्ध, बिरामी मर्कामा
राजधानीमा मन्त्रीको चर्चा, दलित सांसदको गाउँमा बास
विनाशकारी भूकम्पपछि १६ कैदीको मृत्यू २१८ फरार